शिवरात्रीमा ड्यालसमा भव्य मन्दिर निर्माण सुरु हुँदै (भिडियो सहित) | himalayakhabar.com
शिवरात्रीमा ड्यालसमा भव्य मन्दिर निर्माण सुरु हुँदै (भिडियो सहित)
8th Sep 2019, Sunday | २०७६ भाद्र २२, आईतवार ०८:३५
ड्यालस (टेक्सस) । आउँदो शिवरात्रीको दिनमा ड्यालस फोर्टवर्थ मेट्रोप्लेक्सको युलेसमा भव्य पशुपतिनाथ तथा बुद्ध मन्दिर निर्माण थालनी हुने भएको छ ।
मन्दिर निर्माण सुरुवातको लागि आवश्यक पर्ने डाउन पेमेन्टको रकम लगभग संकलन हुने क्रममा पुगेकोले मन्दिरको निर्माण सुरु हुने भएको हो । शनिबार साँझ आयोजित विशेष कार्यक्रममा बैंक खातामा ७ लाख ५० हजार डलर जम्मा भैसकेको र ५० हजार डलर पछिको मितिको चेक संकलन भएको जानकारी फण्डरेजिङ कमिटीका संयोजक कृष्ण लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
‘हामीलाई शिवरात्रीका दिन निर्माण थालनी गर्न १२ लाख डलर चाहिन्छ’ मन्दिर बोर्ड अफ ट्रष्टीका अध्यक्ष विनय अर्यालले भन्नुभयो । त्यो रकम लगभग संकलन हुने क्रममा पुगेको छ ।
ड्यालस फोर्टवर्थको युलेसमा भव्य पशुपतिनाथ मन्दिर तथा बुद्ध स्तुपा सहितको भव्य मन्दिर निर्माण गर्न नेपालीहरु जुटेका छन् । त्यसको लागि ५० लाख डलर लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
‘केही दिनभित्रै स्टेरिङ कमिटीको बैठक बसेर निर्माणको थप प्रकृयामा अघि बढ्दैछौ,’ बिओटी अध्यक्ष अर्यालले भन्नुभयो । स्टेरिङ कमिटीको संयोजकमा ड्यालस फोर्टवर्थका सबैका प्रिय व्यक्तित्व रमेश पोखरेल हुनुहुन्छ ।
मन्दिर र स्तुपा सहितको हलहरुको डिजाइनलाई अन्तिम रुप दिनका लागि स्टेरिङ कमिटीले प्रकृया अघि बढाउनेछ । नेपाली इन्जिनियर रवि अधिकारी सहितको प्राविधिक टोलीले तयार पारेको डिजाइनलाई धेरैले मन पराएका छन् ।
शनिबार आयोजित कार्यक्रममा मन्दिरका लागि ५० हजार डलर सहयोग गरेर संरक्षक बन्नुभएका ११ जनालाई सम्मानपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो । संरक्षक बन्नुभएकाहरुमा गौरीराज जोशी, डा. मुरली अधिकारी, बासुदेव भण्डारी, कपिल अधिकारी, डा. सञ्जिव श्रेष्ठ, दिपेश श्रेष्ठ, यमुना भट्टराई, भीम कार्की, शैलेन्द्र मानन्धर, अनिल पाठक र नरेशराज पाण्डे हुनुहुन्छ ।
त्यस्तै पुरै रकम चुक्ता गरेर संस्थापक, बोर्ड अफ ट्रष्टी बन्नुभएकाहरुलाई पनि शनिबारनै सम्मानपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो । अनरेवल बोर्ड अफ ट्रष्टीको सदस्य हुन १५ हजार, बोर्ड अफ ट्रष्टीका लागि ११ हजार, संस्थापक सदस्यका लागि तीनहजार, अनरेवल संस्थापक सदस्यका लागि ५ हजार र संस्थापक सदस्यको लागि तीनहजार सहयोग गर्नुपर्छ । ड्यालस फोर्टवर्थ मेट्रोप्लेक्समा रहेका धेरैले किस्तावन्दीमा तिर्नेगरि मन्दिर निर्माणका लागि सहयोग गरेका छन् ।
शनिबारको कार्यक्रममा एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष सुनिल साहले मन्दिर र सामुदायिक भवनले समाजलाई जोड्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ड्यालसबाटै प्रेरणा लिएर अमेरिकाका धेरै राज्य र शहरहरुमा रहेका नेपालीहरुले मन्दिर सहितको सामुदायिक भवन निर्माण गरिरहेको प्रसंग समेत उठाउनुभएको थियो ।
युलेसको मन्दिर परियोजनामा अहिलेसम्म ६ सय ५६ परिवार जोडिइसकेका छन् । यसमध्य ११ जना संरक्षक, ४८ जना अनरेबल बोर्ड अफ ट्रष्टी, ३७ जना बोर्ड अफ ट्रष्टी, १७३ जनाले संस्थापक सदस्य हुन प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् ।
नयाँ मन्दिर अमेरिकाका रहेका नेपालीमुलका चौथो पुस्तालाई समेत थेग्नेगरि बनाउन लागिएको प्राविधिक रवि अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो । अहिले अर्भिङमा रहेको मन्दिर सहितको सम्पत्तिलाई बिक्री गरिने र सहयोगदाताबाट प्राप्त सहयोग, बैंक ऋण समेत गरेर युलेसमा भव्य मन्दिर निर्माण गरिने जनाईएको छ ।
मन्दिरलाई १५ हजार सहयोग दिएर अनरेबल बोर्ड अफ ट्रष्टी हुनुभएकी शकुन्तला ढकालले अहिलेको मन्दिरमा जाँदा प्रयाप्त पार्किङको अभाव, भैरहेको संरचना साँघुरो महसुस भएकोले नयाँ मन्दिर बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । ७ वर्ष अघि निर्माण हुँदा अहिलेको मन्दिर ठूलो जस्तो लागेकोमा नेपालीहरुको संख्या बढेसँगै मन्दिरमा झण्डै एकसय वटा गाडी अटाउने पार्किङ भएपनि सधैँभरि समस्या हुँदै आएको छ । बिभिन्न गतिविधिहरु गर्न हल, कोठाहरुको समेत अभाव महसुस भएको छ ।
कार्यक्रममा नेप्लिज बुद्धिष्ट एसोसिएसन टेक्ससको तर्फबाट युलेस प्रोजेक्ट अघि बढाउन एकलाख ८ हजार सहयोगको घोषणा स्वयम्भुराज शाक्यले गर्नुभएको थियो ।
नेपाली सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक केन्द्रले मन्दिर सहितको बुद्ध स्तुपा परियोजनामा जोडिनका लागि नेपाली समुदायसँग आग्रह गरेको छ । ‘यो परियोजनामा ठूलो धनराशी लगानी हुने भएकोले सबैको सहयोग र सद्भाव हामीले अपेक्षा गरेका छौ,’ केन्द्रका अध्यक्ष सुरेशचन्द्र पोखरेलले भन्नुभयो ।
काठमाडौँ । काठमाडौँको बौद्धमा एक घरमा लुटपाट गर्ने योजना बनाउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट खटिएको ...
अस्टिनमा आउँदो सप्ताहप्त पासपोर्ट शिविर हुँदै
२०७६ भाद्र २२, आईतवार ०९:०५
२०७६ भाद्र ३१, मंगलवार ०७:३०